Iindaba-Itekhnoloji yoyilo oluphambili lwe-LED high bay light
Iitekhnoloji ezintsha, izinto ezintsha, kunye neetekhnoloji ezintsha zisetyenzisiwe ngokuqhubekekayo kuyilo lwamandla amakhulu e-LED, zibeka isiseko esiqinileyo kuyilo lwezibane ze-LED ezinamandla amakhulu. Kwizibane ze-LED, ezona zinto zibaluleke ngakumbi kukuqhuba kunye nokusasaza ubushushu.
Amandla ombane ngumgangatho ophezulu, ukusebenza ngokukuko, kunye nozinzo oluphezulu lwamanzi e-LED angenawo amanzi okuqhuba ngoku akhethekileyo enzelwe ii-LEDs. Ukuqalisa ngokukhawuleza, uluhlu olubanzi lwemithwalo ehambelanayo, imisebenzi epheleleyo yokukhusela, i-voltage engenayo ye-AC85-265V, ulawulo oluphezulu oluchanekileyo lwangoku, ukusebenza kakuhle kunye nokusebenza okuthembekileyo, kunye nokubonakala kwe-aluminium konke kwenza izibane ze-LED zikhuseleke kwaye zizinze.
2. Uyilo lokusasaza ubushushu
Kwii-LED ezinamandla amakhulu, ukusasaza ubushushu yingxaki enkulu. Umzekelo, i-10W emhlophe i-LED inefotoelectric yokuguqula ukusebenza kwe-20%, kunye ne-8W yamandla ombane aguqulwa abe ngamandla obushushu. Ukuba ukusasaza kobushushu akusetyenziswanga, ubushushu obusisiseko be-LED yamandla aphezulu buya kunyuka ngokukhawuleza. Xa ubushushu bempambano (TJ) buphakama ngaphezulu kobushushu obuvumelekileyo (ngesiqhelo i-150), i-LED enamandla aphezulu iya konakaliswa ngenxa yobushushu. Ke ngoko, uyilo lokusasaza ubushushu ikwangowona mxholo ubalulekileyo. Makhe sixoxe ngoyilo lokusasaza ubushushu kwizinto ezimbini ze-aluminium substrate kunye nesinki yokufudumeza.
2-1. Ukhetho olungaphantsi
Ukusetyenziswa kweemveliso ze-LED, kuhlala kufanelekile ukuba kuhlanganiswe imithombo yokukhanya ye-LED kwindawo esecaleni. Ukongeza kwindima yesakhiwo semodyuli ye-LED, kwelinye icala, njengoko amandla emveliso ye-LED esiba phezulu nangaphezulu, ibhodi yesekethe ikwadlala indima yokuchitha ubushushu, ichithe ubushushu obuvelisiweyo. Yenziwe ngekristale ye-LED. Ke ngoko, ukhetho lwezixhobo kufuneka luthathele ingqalelo iimfuno zamandla esakhiwo kunye nokuchithwa kobushushu. Kwi-substrate, sithelekise i-FR4, i-substrate ye-ceramic kunye ne-MCPCB. ngokulandelelana.
(1) Uhanjiso lobushushu be-FR4 lumalunga ne-0.36W / m. K, ayinakho ukuhlangabezana neemfuno zokutshiswa kobushushu bokukhanya okuphezulu kwamandla e-LED.
(2) Uhanjiso lobushushu beekeramics lukhulu kune-80W / m. I-K, ebiza kakhulu, inkqubo eqhubekekayo, ayinakusetyenziswa kwindawo enkulu.
(3) Uhanjiso lobushushu lweMCPCB lukhulu kune-2.0W / m. Ixabiso eliphakathi, ukuqhubekeka ngokuqinileyo, itekhnoloji evuthiweyo kunye nemveliso ngobuninzi.
Uyilo lweRadiator 2-2
Indima yesinki yokufudumeza kukufunxa ubushushu obudluliselwe kwi-substrate okanye kwi-chip, emva koko usasaze kubume bangaphandle ukuqinisekisa ubushushu obuqhelekileyo be-chip ye-LED. Uninzi lweeradiyetha luyilelwe ngononophelo kwindalo yendalo kunye nokuhanjiswa okunyanzelekileyo. Oko kukuthi, irediyetha esebenzayo kunye neradiyetha yokwenziwa.
3. Iimpawu zezibane eziphezulu ze-bay:
Isibane se-bay esiphezulu se-LED sisebenzisa isibane esinye samandla aphezulu e-LED njengomthombo wokukhanya, samkela uyilo oluyimodyuli olunemodyuli eyodwa, kwaye sisebenzisa ukukhanya okuphezulu okuphuma ngaphandle kwe-semiconductor chips, ukuhambisa okuphezulu kobushushu, ukubola kokukhanya okuphantsi, umbala ococekileyo , akukho zixhobo zokumela;
Uyilo olwahlukileyo lokuntywila kobushushu, ngokudityaniswa nebhokisi yombane, busasaza ngokufanelekileyo ubushushu, ngalo ndlela kuncitshiswa ubushushu kwisibane, kwaye kuqinisekiswe ngokufanelekileyo ubomi bomthombo wokukhanya kunye nonikezelo lwamandla.
Umphezulu weradiyetha yi-anodised kunye ne-anticorrosive, kwaye ulwakhiwo luhlangene kwaye luhle.
Luhlaza kunye nokusingqongileyo, akukho kungcoliseka, akukho khokelo, imekyuri kunye nezinye izinto ezingcolisayo, akukho kungcoliseka kwendalo.
Iziphumo zombala zilungile, umbala wento uyinyani, kwaye imibala eyahlukeneyo yokukhanya iyafumaneka. Iyakwazi ukuhlangabezana neemfuno zobume obahlukeneyo, ishenxise iimvakalelo zokudakumba eziziswa bubushushu bombala wezibane zemveli, yenze umbono ukhululeke, kwaye uphucule ukusebenza kakuhle kwabantu.
Isebenzisa amandla ombane angoku kunye nolawulo lwamandla rhoqo, isebenza ngombane obanzi, yoyisa igridi yamandla, ungcoliseko lwengxolo kunye nokungazinzi kokukhanya okubangelwa yi-ballast, kwaye kuthintela ukucaphuka kwamehlo nokudinwa.
Iziphumo zokuhombisa zilungile, itekhnoloji yonyango ekhethekileyo yomphezulu yamkelwe, imbonakalo yenoveli, ufakelo lulula, ukudiliza kufanelekile, kwaye uluhlu lwesicelo lubanzi.